1. Gịnị bụ Spotify beta
2. Spotify beta na Spotify adịchaghị
3. Spotify beta maka iOS / windows / Android / Mac / Linux
1. Gịnị si Spotify beta
Spotify Beta bụ mbido version nke Spotify music n'elu ikpo okwu. Spotify bụ a maara nke ọma ozi na music ụlọ ọrụ. Na ya ahụkebe ọrụ na collection, Spotify ka tọrọ imprints na omume. Spotify bụghị nanị emewo music ege ntị ahụmahụ na-a dị iche iche ozo kamakwa eguzo dị ka siri ike mpi maka yiri ọrụ dị ka Pandora, Soundcloud, AppleMusic, wdg .. Spotify netwọk ugbu nwere n'elu 7 nde arụsi ọrụ ike ọrụ (free akaụntụ), na n'elu 2 nde-arụsi ọrụ ike adịchaghị na akaụntụ debanyere aha.
Beta nsụgharị nke software na-ulo oru na ahịa na-nzaghachi si ndị ọrụ banyere oganihu na ngwa na-na-echiche maka ndị ọzọ atụmatụ. Na nso nso Spotify nwekwara odomo a obibia ike ndị kasị mma nke pụrụ igbo ekesidiade ya ọrụ.
Spotify abịa na a smart Usoro n'ahịa ya ngwaahịa, na na bụ site na-eme ụfọdụ nkiti atụmatụ dị ka free ọrụ, na ụfọdụ nanị ndị adịchaghị ọrụ. Ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị denye aha na adịchaghị na akaụntụ, ị pụrụ isi rite uru ya maka ka ala dị ka £ 9,99 kwa ọnwa. Ị nwere ike onwe gị eche ihe dị iche na gị music na-ege ntị ahụmahụ. Spotify ama nyere ụfọdụ ezi atụmatụ maka 'Free ọrụ', kamakwa ndị a free ọrụ nwere ike a 30 n'efu ụbọchị ikpe maka 'adịchaghị ọrụ'. Ugbu a na nke ahụ bụ ihe dị iche iche. Ị nwere ike kpọọ ya 'na-agbalị ya tupu ị zụrụ ya'.
Ndị na-esonụ ga-atụle banyere atụmatụ na ndị dị na beta na adịchaghị.
All tracks dị All tracks dị
Play gị onwe gị mp3 on ina
Ee maka desktọọpụ
ịkpọgharịa naanị - n'ihi na mobile Ee
Track play ókè
ejedebeghị 5 ugboro Ejedebeghị 5 ugboro
Mepụta omenala listi ọkpụkpọ
E Nwere E Nwere
Were music ná mba ọzọ
14 ụbọchị ịgba Ee
On ina desktọọpụ
ịkpọgharịa nanị maka mobile (6 tracks kwa awa) A na-achọ
Spotify site mpụga ngwaike ma ọ bụ Spotify jikọọ
Ọ dịghị, ọrụ adịghị Ee
Ugbu 'UGBU A' mma nke na oru na nso nso bụ n'okpuru ọnwụnwa na a na-atụ anya ga-dị ka adịchaghị debanyere aha. The UGBUA atụmatụ na-enye music na ndabere nke nakawa etu esi na ọnọdụ uche mmadụ. Ọ adapts-amasị gị na-atụ aro yiri songs na ndị ọzọ. (Ya dị naanị maka iOS ọrụ naanị.)
Na adịchaghị ndenye aha, ị pụrụ ime nke ukwuu na Spotify, kpatụ music larịị (ohere elu àgwà gụgharia), azọpụta gị music offline na-egwu mgbe ọ bụla na n'ebe ọ bụla ị chọrọ.
Beta version nke Spotify-achọ ọrụ na-banye-na netwọk, isonyere Spotify obodo jupụta n'elu ụfọdụ nkọwa.
3. Spotify beta maka iOS / windows / iOS /
1. Spotify Beta on iOS
Na ọhụrụ update na iOS version, Spotify ka a mara ọkwa emelitere version. Ọhụrụ version kwuru na-arụ ọrụ na UGBUA arụmọrụ. Ọ ga-arụ ọrụ na Fitness ngwa nke ga-mmekọrịta na music dị ka gị na-agba ọsọ tempo.
Ndị ọhụrụ update maka windows (desktọọpụ) ngwa bụ Spotify jikọọ. Nke a na-enye ohere ka ị na na music n'ebe ọ bụla eji ihe ọ bụla na ngwaọrụ. Nke a pụtara na, kama naanị site na iji ngwaọrụ gị okwu, ị nwere ike iji Spotify dị ka ime na-egwu music eji gị laptọọpụ, TV ma ọ bụ mpụga okwu. Nke ahụ bụ ụfọdụ ịtụnanya nnwere onwe maka music ndị hụrụ.
3. Spotify beta maka iOS
Ndị ọhụrụ Spotify beta 3.1 maka Android abịa na-agba ọsọ arụmọrụ. Nke a ga-mmekọrịta gị na playlist ka kwa gị na-agba ọsọ tempo. Ihe niile ị chọrọ ime na-agba ọsọ na a mgbe nile ijeụkwụ oge ụfọdụ, ngwa ga-chọpụta ọsọ na otú ejikọta ihe tracks ya. Ọzọ ọhụrụ mma bụ audio / video egosi dị na Spotify netwọk. Nke a ọhụrụ mma na-enye nkwanye n'ihi na ụfọdụ nhọrọ ọwa dị ka osoje News, Nerdist na Comedy Central. Ụfọdụ na-atụ anya ọwa na-BBC na MTV.
> Resource> Spotify> otú ọtụtụ Ihe Ị Maara Banyere Spotify Beta